Miss Korea တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ idol (၁၃) ဦး | Asia News Bar
နိုင်ငံကိုယ်စားပြု Miss တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ကတော့ သတ်မှတ်ချက်တွေများလွန်းပါတယ်။ ရုပ်ရည်လှပဖို့တစ်ခုတည်းသာမက အရည်အချင်းရော ကိုယ်ကျင့်တရားရော အကျင့်စရိုက်ရော ပြစ်ချက်မရှိမှသာ ဖြစ်နိုင်တာပါ။ Kpop idol မိန်းကလေးတွေထဲကမှ Miss Korea ဝင်ပြိုင်ရင်တောင် အနိုင်ရလောက်တဲ့ အမျိုးသမီး ၁၃ ဦးကိုတော့ koreaboo သတင်းဌာနက ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုအရ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Lee Hyori ကတော့ ရုပ်ရည်ရော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားရော ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လှပပြီး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်နဲ့ ညိုမောင်းစိုပြေတဲ့ အသားအရည်ဟာ Miss တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်းမှီတဲ့အပြင် အလှူအတန်းရက်ရောတဲ့ ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ကလဲ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ်တဲ့။
အရှိန်အဝါအပြည့်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာအပြင် မြင်သူတကာတိုင်း အံ့ဩရလောက်အောင် အချိုးအစားပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် Miss Korea အဖြစ်ထိုက်တန်ပါတယ်။ အဓိကကျတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလဲ ဖော်ရွေတဲ့ Mijoo တို့ကအမှတ်ပြည့်ပါပဲ။
Yura (Girls’ Day)
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Girls’ Day အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာမှ မြင့်မားတဲ့အရပ်နဲ့ ကျစ်လစ်သွယ်လျတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့ Yura ပါ။ ကော်ဇောနီပေါ်မှာ evening gown နဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါတိုင်း Miss Korea များလားလို့ တွေးမိကြပါသတဲ့။
မိန်းကလေးချင်းတောင် ငေးမောရတဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့အလှနဲ့ မြင့်မားတဲ့အရပ် သွယ်လျတဲ့အချိုးအဆစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် လူမှုရေးပြစ်ချက်လဲကင်းပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကလဲ ပြေပြစ်လွန်းတာမို့ Miss Korea ဝင်ပြိုင်ရင်တောင် အနိုင်ရမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။
ပရိတ်သတ်အချို့က Miss Korea လို့ နာမည်ပြောင်တောင်ပေးထားတဲ့ Joy ကတော့ ဒီစာရင်းမှာ မပါမဖြစ်ပါပဲ။ မြင့်မားတဲ့အရပ်နဲ့ ကျော့ရှင်းစွာလှသလို စင်မြင့်ပေါ်မှာလဲ သဘာဝကျကျ pose ပေးတတ်တာမို့ Miss Korea စင်မြင့်ထက်မှာလဲ ထွန်းလင်းနေဦးမှာပါတဲ့။
ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကြားမှာ ထူးထူးခြားခြားထင်ပေါ်နေတဲ့ မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းလေးတွေနဲ့ မြင့်မားထင်ရှားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုက သူ့ရဲ့အားသာချက်ပါပဲ။ ဖော်ရွေပွင့်လင်းတဲ့ အကျင့်စရိုက်ကြောင့်လဲ ကိုရီးယားပြည်သူတွေက သူ့ကို Miss ဝင်ပြိုင်စေချင်ကြပါတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ်သာရှိသေးပေမယ့် မြင့်မားလွန်းတဲ့အရပ်နဲ့ ရှည်လျားတဲ့ခြေတံတွေကြောင့် မြင်သူတကာ ရင်သပ်ရှုမောဖြစ်ရပါတယ်။ Evening gown ဝတ်စုံရှည်နဲ့ Miss Korea ပြိုင်ပွဲ စင်မြင့်ထက်မှာ Wonyoung သာဆို ဘယ်လောက်တောင်လှနေလိုက်မလဲ တွေးတာနဲ့တင် ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။
Gown တွေနဲ့ဆို Jisoo ရဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့အလှက ပိုပြီးအရောင်လက်လာတာကိုက သူဟာ Miss Korea တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ သက်သေပါပဲ။ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလဲ အတော်လေး ပါးနပ်ပြီးပွင့်လင်းတာ အားလုံးအသိပါ။
Jiyeon ရဲ့ visual ကတော့ ပွဲဦးထွက်စကနေ အခုချိန်ထိ အလှတကာ့အလှဆုံးလို့တောင် ဆိုရမလိုပါပဲ။ ကျက်သရေရှိပြီး ဂုဏ်ရှိန်မြင့်တဲ့မျက်နှာကျနဲ့ အဆီပိုမရှိပဲ သွယ်လျကျော့ရှင်းတဲ့အချိုးအစားကတော့ Miss Korea တွေတောင်ရှုံးလောက်ပါတယ်။
TC Candler ကထုတ်ပြန်တဲ့ 100 Most Beautiful Faces မှာ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲခဲ့ကတည်းက သူ့ရဲ့အလှဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတယ်ဆိုတာ သက်သေပါပဲ။ အရပ်အမောင်း အချိုးအစား ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အားလုံးဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ပထမတန်းစားပါပဲ။
Park Xiyeon (former Pristin Member)
Pristin ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် Park Xiyeon ကိုလဲ ပရိတ်သတ်တွေက Miss Korea ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ကြေးပေးကြပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ သူ့ရဲ့ ရှည်သွယ်တဲ့မျက်နှာကျနဲ့ ကျော့မော့တဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကြောင့်ပါတဲ့။
Gfriend အဖွဲ့ထဲမှာတင်မက မိန်းကလေး idol တွေထဲမှာပါ အရပ်အရှည်ဆုံးနဲ့ အသွယ်လျဆုံးထဲမှာ ပါတဲ့ Sowon ကတော့ တကယ်ကို Miss တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရည်အသွေးတွေအားလုံး အပြည့်အဝရှိနေတဲ့ မိန်းမလှလေးတစ်ဦးပါပဲနော်။
အလှဆုံး idol တွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Suzy ကိုတော့ Miss A အဖွဲ့ဝင်အပြင် Miss Korea ပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ်ပါ ပရိတ်သတ်တွေက မြင်ယောင်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ Gown တွေနဲ့ဆိုရင် နတ်သက်ကြွေလာတယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် လိုက်ဖက်လွန်းပြီး ပြစ်ချက်ရှာမတွေ့လို့ပါတဲ့။
Next Private Lives ရိုက်ကွင်းမှာ Seohyun ကို တန်ဖိုးထားရတဲ့ ဂျက်ကင်အင်္ကျီ​လေး ​ဝတ်​ပေးခဲ့တဲ့ kyung phyo »
Previous « Suga တစ်ယောက် ကျောင်းတုန်းကဘယ်လိုကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သလဲ?
Korea Forbes ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ 2020 ခုနှစ်အတွင်း ဝင်ငွေအများဆုံးနဲ့ အချမ်းသာဆုံး Korea Celebrity (9) ယောက်
BLACKPINK member တွေ ဘယ်အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလှဆုံးလို့ ထင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာသလည်း ဆိုတော့…
Suga ရဲ့ နူးညံ့တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့် မျက်နှာကအပြုံးတွေကို ဖုံးဖိထားလို့တောင်မရတော့တဲ့ Jimin
YG ရဲ့ ​ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း​တွေအရ လာမယ့် ၂၀၂၁ မှာ BigBang အဖွဲ့ comeback ပြုလုပ်​နိုင်တော့မှာလား?
အိပ်မက်အတွက် အချိန်အကြာကြီး ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် idol များ (အပိုင်း-၁)
ပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒအရ Solo Album ထုတ်ပြီး တကိုယ်တော်ပွဲဦးထွက်စေချင်နေကြတဲ့ Kpop Idol (၆) ဦး